ပန်းမှိုက်ခရီးအွန်လိုင်းတွေကိုမကယ်မနှုတ်သူတို့ကတိပေးပါတယ်အဘယျသို့? ကျွန်တော်ကြားရတယ်ခရစ်:အရာအတိအကျအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးအခမဲ့အရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများ! ထိုနာမည်မှာအဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြု၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်တစ်ဦးစားပေးဖြစ်ဖို့ဖန်တီးမှုကိုတစ်ဦးလေထုကိုသင်တို့ကိုခံစားဘယ်မှာအဆင်ပြေခံစားထူကျွန်းစုယုတ်အားကစားပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းတစ်ချက်ချင်းလက်ငင်းအတွက်။ ကျော်နှင့်အတူ ၆ နှစ်ထုတ်လုပ်မှု၏နောက်ကွယ်မှကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောအနာဂတ်ဂိမ်းစီစဉ်ထားရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကောင်းအချိန်အ FASG အသိုင်းအဘယ်အရာကိုမြင်မှအားလုံး၏အပျော့အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။, ဒီဒေါင်အဆင့်အဖြစ်အပျက်နှင့်ကျနော်တို့ဒါမာနထောင်လွှားနေတဲ့ဒေတာဘေ့စများ၏ဂိမ်း၏စီမံပြီးပါပြီတက်ဆောက်လုပ်ဖို့။ လုံလောက်ကြောင်းပြောဖို့ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်သင်လုပ်နေတာကိုစစ်ဆေးခြင်းအချို့သောအလေးအနက်လိင်ဂိမ်းများ၊ဤအရပ်သိမ်းပိုက်စောင့်ရှောက်မည်သည်တစ်လျောက်ပတ်သောအမျိူးအချိန်ရဲ့!
ဤအရာအားလုံးထွက်စတင်ခဲ့၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်သောအချက်ကိုကျွန်တော်ဆုအတွက်အချို့သောကြီးမြတ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်ဘယ်တော့မှမရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲ။ ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်အစဉ်မယူခဲ့ပါကာလပတ်လုံးငါတို့အဘို့အထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ကျနော်တို့ရှိသည်ချင်ပါတယ်ယူသို့ကိစ္စရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်အတူရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ရင်း;ကျနော်တို့အပင်ပေါက်သော်လည်းအရေးယူသို့နှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမှောင်မိုက်၏ညမ်းဂိမ်းဖန်တီး။ ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပြီတစ်ခုလွယ်ကူစီး၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိ၏နှင့်အတူရလဒ်များကိုနှင့်အထင်မယ်၊လူတိုင်းကအကြောင်းဝန်ခံရန်ရှိသည်များမှာနံပါတ်တစ်ပလက်ဖောင်းပတ်ပတ်လည်အကြော dudes ချင်သောဂိမ်း။
အမျိုးမျိုးအမွှေးအကြိုင်များ၏အသက်၊အဘယ်ကြောင့်သောအချစ်ထုတ်လုပ်ဖို့အများကြီးညမ်းသောအဖုံးတစ်အစုအဝေး၏ကွဲပြားခြားနားသော niches။ သာအခြေခံအဓိကစီ၏ဂိမ်းဆက်လက်တည်ရှိ၊ဒါပေမယ့်ဒါသည်အနုပညာလက်ရာများ၊ဂိမ်းကစားစတိုင်နဲ့တော့။ စဉ်းစားပြီးဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တစ်ဦးသည်ရေနွေးငွေ့ညမ်းဂိမ်းများ–သငျသညျအဘယျသို့ရလိမ့်မယ်သင်၏လက်ကိုအပေါ်အနောက်-အဆင့် smutty ခေါင်းစဉ်တွေကိုကယ်ဖို့ခွင့်ပြုကောက်နှင့်ရွေးချယ်အမျိုးအစားအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲသင်အတွက်စိတ်ဝင်စားင့်။ အခမဲ့အရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများဆင္ေထိုင်ပေါ်တစ်ဦးစာကြည့်တိုက် ၄၅ ဖြန့်ချိ–အခြား ၄ စီစဉ်ခံရဖို့အတွက်လာမယ့် ၂ လအတွင်းကဲ့သို့ကောင်းစွာ!, ထုတ်လုပ်ခဲ့ဖူးမြန်ဆန်၊ဒါပေမယ့်မသွားဘူးကြောင်းစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်ခံစားခဲ့:ဤလူသတ်သမားဂိမ်းအပည္ဆိုင္ရာအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အ။ ရှိသမျှတစ်ခုတည်းကိုခေါင်းစဉ်ဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မလိုလျှင်၊ကျွန်တော်တို့ပစ်ထုတ်စတင်။ အားလုံးဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်လုပ်-လံုးခ်င္း–အနှံမှတတိယပါတီကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် relicensing အပေါ်ဝင်။ ဒီအျဖင့္ဂိမ်းကျနော်တို့သိမ်းထားတဲ့အထိမတွေ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကစား၊သူတို့ကိုသင်ရှိသည်သွားအလာအပေါ်အတွက်–အဘယ်သူမျှမနှစ်ခုနည်းလမ်းများအကြောင်းကို!
သိသာကြီးစောပိုင်းအပေါ်ထုတ်လုပ်ရေးလူတွေတကယ်လိုအရမိမိတို့လက်ကိုအပေါ်အလေးချိန်မတူသောအရည်အသွေးအကြောင်းဂိမ်းများကြည့်ရှုထင်အဖြစ်ကစား decently။ အများကြီးအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ(အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်၊ပန်သူဌေးက!)သို့သွားပြီပြည့်စုံအနုပညာနှင့်သေချာလှပါတယ်လုံးဝစိတ်ကူး။ နောက်ကျောထိုနေ့ရက်ကာလ၌၊အများဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းများနီး၌မီးေတြမွာပဲဘေးထွက်စီမံကိန်းများကိုနှင့်အတူလူများ၏အဆီ-ဆီလျော်နားလည်မှုကုဒ်။ မဖြတ်အတွက်ခေတ်သစ်ခေတ်၊ဒါကြောင့်သင်ပါလိမ့်မယ်၊ကျေနပ်ကြောင်းသိရဖို့အပျနှံထားသောအနုပညာအဖွဲ့ကအကြောင်းအဆင္ေပါဝင်ပါသည် ၄။, ဒီကောင်တွေကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကျွမ်းကျင်နှင့်ရုပ်ဖော်ပုံ၊ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ပုံဖော်ပြီးတော့–သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများလျော့မပေးဒီနေရာနှင့်ကျွန်တော်ညှစ်တိုင်းနောက်ဆုံးအပိုင်းအစများ၏တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ပြီးသူတို့အထဲက၊ရှေ့တော်ဌါသူတို့ကိုပြန်အပူနှင့်ရတဲ့ပင်ပို။ အဘယ်သူမျှမ၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်:ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေဒီမှာအများကြီးဖန်တီးမှုလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာသေချာဖို့သူတို့အတူသက်သာအလုပ်လုပ်။ ရှိပါတယ်လျှင်မည်သည့်လွဲ–သူတို့ရဲ့စကားလုံးသည်နောက်ဆုံးအရာ! သေချာအောင်၊ဒါကြောင့်ဖန်တီးစေခြင်းငှါအချို့တင်းမာအချိန်လေး၊ဒါပေမယ့်အနေဖြင့်ဧည့်ခံပါတယ်ထံမှလက်ခံရရှိအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပင်ဝေ၊ဒါဟာတော်တော်သိသာတဲ့ကျနော်တို့ဟာကောင်းသောလက်၌အမြင်အာရုံ။, သူတို့ဟာအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်အချိန်မှထုတ်ဝေသည့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ:အဲဒီအကြောင်းအသင်းမှာယ့်ကိုမာနထောင်လွှား၏။ ကိုယ့်တဦးတည်းမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းလုပ်ထားသင်ပြပါလိမ့်မယ်အစွန်းရောက်အဆင့်အရည်အသွေးအရထွက်အရည်အချင်းအနုပညာအသင်းကြီးစွာသောအလုပ်၊ယောက်ျားတွေ!
အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အဂိမ်းများများအထူးအင်္ဂါမရစေခြင်းငှါ၊ဘယ်နေရာမှာမဆို:အပြည့်အဝလိုက်ဖက်ဖြတ်အားလုံးသည်ထုတ်ကုန်များ။ ကျွန်မတို့ဒီအောင်မြင်သည်သေချာနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြန့်ချိပြုကနေတဆင့် Chrome၊ေပ၊မြေခွေးသို့မဟုတ်အစွန်း။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အပြေးတစ်ခုမှာဤ၊သင်လုံးဝသုညနှင့်အတူကိစ္စများရတဲ့အတွင်းအပြီးတစ်ပေါက်ကွဲမှု။ သင်ဖြစ်နိုင်အခမဲ့အရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများကိုပွေးအပေါ်တော်တော်များများမဆိုအရာက္ဇာလက်ခံရရှိကြောင်းဖါခဲ့သည့်အတွက် ၂ နှစ်အထိ၊ဒါပေမယ့်အခုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတရားဝင်ထောက်ခံမွာထောက်ခံမှုသူတို့ကိုအခုအထိပူ၏သေခြင်းကို။။။။။, သဘာဝကျကျ၊ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဒီရာက္ဇာစနစ်လက်လှမ်းရှိသည်၊လူမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်မှာရနိုင်ကြသည်မှာမရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ ငရဲ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ပင်တပြိုင်တည်းအပေါ်ဆာဗာမှာၾကည့္ရန္ဆ၊အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသင်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဦးတည်းအပေါ်စက်ကိရိယာနှင့်ထိုအကူးအကူးအပြောင်းမှအခြား–-တော်တော်လေးသပ်ရပ်၊အယ်?
နေစဉ်၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုအခမဲ့အရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများဖြစ်ပါသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊ငါသည်အများအပေးအနည်းငယ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအထက္သန္ဆံုးျကုမ္ပဏီနှင့်အဘယ်မှာတွေ့ရမိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ ၂ အနှစ်၊ကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်ချင်တာနှစ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်တည်ထောင်ထိပ်တန်း၊ပြီးပြည့်စုံအောင်မြင်မှုစနစ်၊အခမဲ့အပိုဆုဗီဒီယိုနှင့်အချို့နောက်ကွယ်မှတွေသင်ပြတတ်သောအရာကိုအပေါ်ဒီမှာနောက်ကွယ်မှတူသောလိင်ဂိမ်းများ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ဆာဗာ(၆၊၀၀၀ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရေတွက်–ချိုမြိန်!)နှင့်အရာရှိဖိုရမ်များအနီး ၅၀၊၀၀၀ ပို့စ်များ။, အားလုံးအားလုံးအတွက်၊အမှုအရာများမှာရှာဖွေနေတက်အဖွဲ့နှင့်အတူတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ပြီးအပြီး၊ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးအခွင့်ထူးတစ်ခုနှင့်ဂုဏ်ရှိသည်ဖို့သင်စီးဘို့တလျှောက်။
ယခုမှာထမှတ်ပုံတင်ရန်ရ။ အခမဲ့အရွယ်ရောက်လိင်ဂိမ်းများသည်နံပါတ်တစ်နှင့်သင်သိရ! ျငိမ္းခ်မ္းေရး။